I-SPC Visum, sihlalutya le intercom yevidiyo ekrelekrele | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | elektroniki, ngokubanzi, Reviews
Siyaqhubeka nohlalutyo lwezixhobo zasekhaya kunye nezixhobo ze-IoT yenzelwe ukwenza ubomi bakho bube lula kangangoko kunokwenzeka, yile nto siyithandayo kwiActualidad Gadget kwaye siyazi ukuba yile nto uyithandayo kakhulu, yiyo loo nto siyizisa. Fumana isihlalo, kuba uphononongo lwanamhlanje lunokushiya ungathethi.
Njengesiqhelo, siza kuhlalutya amandla akho kunye nobuthathaka bakho. Sikwakhapha olu hlalutyo nevidiyo ukuze ubone ukuba isebenza njani. Sihlalutya i-SPC Visum, i-intercom ekrelekrele yevidiyo eyilelweyo ukuze ugqibezele ukuzenzekelayo kwekhaya lakho ukuya kwelona liphezulu, yazi nathi.
Sijonge iimveliso ze-IoT ngokubanzi kwiinyanga ezidlulileyo, Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba uhambe kwicandelo lokuphonononga kwakho xa kunokwenzeka uphoswe yinto. Ngendlela efanayo ekufuneka ndikuxelele ngayo, ividiyo ekhokelela kolu hlalutyo yeyona ndlela yokubona ukuba imveliso inomdla ngokwenyani njengoko ibonakala, kuba siyibona isebenza, ke sicebisa ukuba uhambe kuyo kuqala kwaye emva koko uyigqibe ngolu hlalutyo lubhaliweyo. Ukuba unomdla kwi-SPC Visum, ungayithenga ngexabiso elifanelekileyo nge LONTOMasihambe nohlalutyo.
3 Uqwalaselo kunye nokusetyenziswa kovavanyo
4 Ukurekhoda amandla kunye noluvo lomhleli
Siqala njengakuhlala kunjalo nangaphandle, esikubonayo kwakamsinya xa sikhupha le SPC Visum kwiphakheji. Sifumana i-intercom yevidiyo edibeneyo kwaye iyasimangalisa, nayiphi na i-intercom enekhamera inamandla ngakumbi, nangona inokuba mncinci, ewe. Si le milinganiselo ilandelayo: 6,6 x 13,5 x 3,8 cm, Ikhatshwa yintsimbi yokufaka iplagi ngokuthe ngqo kuyo nayiphi na indawo yenethiwekhi, eyi-compact 4,5 x 7 x 6,5 cm, ngokuqinisekileyo ayinabunzima. Ngokwesisindo sinee-262 iigrem kwi-intercom yevidiyo kunye ne-53 gram yentsimbi yasemnyango, Ayizizo iimveliso ezinzima kakhulu, ndingathi iibhetri ezifakwe kwi-video ye-intercom zezona zinzima kakhulu kwiphakheji.
Zakhiwe ngeplastikhi emnyama, Sinezinto zephakheji yonke into oyifunayo, ukusuka kwiiplagi ukuya kwizikrufu kunye neebits zokufaka i-intercom yevidiyo eludongeni, Kuyinyani ukuba kunokuba lula ukuba, kodwa akukho ngaphezu kwayo nayiphi na i-intercom yevidiyo. Ngaphambili sinekhamera enesenzi sentshukumo kunye nee-infrared LEDs eziza kuthi, phakathi kwezinye izinto, sisebenzise umbono wobusuku. Kwiziko elisezantsi kukho iqhosha elijikeleziweyo eline-arc ye-LED ekhanyisayo xa kufunyanwa intshukumo kwaye isebenza ukukhalisa intsimbi.
Ewe, siqala ngekhamera, eyona nto ibaluleke kakhulu. Sinesenzi esivakalayo esinokurekhoda kwisisombululo se-HD, yiyo i-720p. Isisombululo sokurekhoda siya kuba yi-1280 x 720 kwaye sinokuthatha imifanekiso ngesenzi esifanayo. Oku kunokwanela ngokujonga ukuba sinembonakalo yokujonga iyonke Iidigri ezili-166 ngokulandelelana, ngelixa i-horizontal ihlala isemgangathweni. Umbuzo wokugcina ushiyelwe ikhadi le-8 GB le-microSD elifakiwe kwiphakheji nangona singayitshintsha kuyo nayiphi na i-microSD esisoloko siyifuna ngokugcina okuphezulu kwe-32 GB iyonke.
Sinefayile ye- isivamvo sokuhambahamba eya kuthi isebenze ikhamera ukuba sinqwenela ukukhanyisa i-LED-yeqhosha, ukumelana nothuli namanzi, izithethi ezibini kunye nombono ebusuku ukuya kuthi ga kwiimitha ezintandathu. Singathetha nje kancinci malunga neempawu zobuchwephesha zale SPC Visum, kodwa kufanelekile ukukhumbula ukuba iphakheji ibandakanya ingxowa yezikrufu, ezimbini i-USB ukuya kwiintambo ze-microUSB kunye nesikhokelo esikhawulezayo sokusisebenzisa, sikhatshwa yibhrashi kunye neeplagi eziyimfuneko ukubeka i-SPC Visum ngqo eludongeni esibona ukuba kufanelekile.
Uqwalaselo kunye nokusetyenziswa kovavanyo
Ukucwangciswa kulula, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukucofa intsimbi apho sifuna khona ukuba ikhale, ukusondela kwi-intercom yevidiyo, ngokukhawuleza. Nje ukuba sikwenze oku, siza kukhuphela usetyenziso lwe-SPC IoT (iOS) (Android) kwaye siza kucofa nje iqhosha lokuseta kwakhona kwimizuzwana emithandathu ukubona ukuba i-LED iyadanyaza, emva koko siza kucofa ku "+" ukongeza I-Visum ye-SPC kwaye siza kubona ukuba Kwimizuzwana nje xa sazisa isitshixo se-WiFi (kuphela i-network ye-2,4 GHz) inxibelelana ngokuzenzekelayo kwaye ngokukhawuleza, olu luncedo kuluhlu lwe-SPC lweemveliso ze-IoT.
Nje ukuba siqhagamsheleke sinokufikelela ngokuthe ngqo kuwo onke amanqaku avela kwisicelo, le yinzuzo enomdla kakhulu. Iziphumo zokurekhoda zilungile nakwimeko zokukhanya ezingekho mgangathweni, nangona umbono wasebusuku awuzukuba yingxaki. Kuhlalutyo asikhange sibe nazo iingxaki zonxibelelwano kwimigama esuka kwi-router kufutshane neemitha ezili-10, kodwa sicinga ukuba ukugqitha kumgama kunokudala ukunqunyulwa. Sineebhetri ezimbini ezibandakanyiweyo, ke singenakwenza ngaphandle kweentambo, nangona ngokobuqu ndiza kuthatha ithuba lokudibanisa ukuze ndinike ukufikelela ngokusisigxina kwaye kungafuneki ndihlawule.
Ukurekhoda amandla kunye noluvo lomhleli
Ngokusebenzisa Siza kuba nakho ukuthetha ngokuthe ngqo kwiyunithi yokungena kwiminyango yevidiyo ngesithethi esiphindwe kabini, ngendlela efanayo apho siya kuba nakho ukwenza ushicilelo, iifoto-skrini kunye nokufikelela urekhodo olugcinwe kwimemori khadi, Olu rekhodo luya kugcinwa kwiluphu kwaye luya kucinywa ukwenza indawo entsha, kodwa sinokulufikelela ngokuthe ngqo kwaye ukuba sifuna ukuzikhuphela kwifowuni yethu, oku kungasinceda kwimicimbi yezokhuseleko. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ngezaziso ezihambayo siya kuba nakho ukuphendula umgcini emnyango ngokukhawuleza naphina apho sikhona.
Uncedo lokuseta kunye nofakelo
Ixabiso lingaphantsi kukhuphiswano
Ezinye izinto zilungile
Kwi-Android, ukusasaza ngamanye amaxesha kunokusilela
Sijongene nemveliso egcwele amanqaku kwaye ixabisa i-euro ezingama-119, Yeyona intercom ye-smart yexabiso eliphantsi endiye ndakwazi ukuyifumana kwintengiso, kuyacaca ukuba akukho nto inzima kakhulu ukuba okanye eyakhelwe kakuhle, kodwa ukuziqhelanisa nexabiso, le SPC Visum ayinakubuzwa ngaphezulu koko inikeza. Ungayithenga kwiAmazon okanye ngokwakho iphepha lewebhu kuhamba esi sixhobo. Ukuba unemibuzo malunga nale SPC Visum, ungathandabuzi ukusibuza kuTwitter (@I-agadget) okanye kwibhokisi yezimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-SPC Visum, sihlalutya le intercom yevidiyo ekrelekrele
Ngaba inokudityaniswa kwisitshixo sombane ukuvula ucango?